Izindaba - Ukuhlaziywa Kokupakisha Kwe-Coefficient Friction Nezinkinga Zokulwa Ne-block Ku-Lamin-Free Lamination
Ukuhlaziywa Kokupakisha Kwe-Coefficient Friction Nezinkinga Zokulwa Nama-block Ku-Lamin-Free Lamination
I-lamination-free lamination ivuthiwe emakethe, ikakhulukazi ngenxa yemizamo yamabhizinisi okupakisha kanye nabaphakeli bezinto ezibonakalayo, ikakhulukazi ubuchwepheshe be-aluminium yokuhlanza i-aluminium yokubuyisa ibuye yathandwa kabanzi, futhi yathatha igxathu elikhulu ngaphansi kwezimo zemvelo zokufaka esikhundleni se-solvent yendabuko- ukukhiqizwa kwe-base lamination kanye ne-extruded extrusion. Amabhizinisi okupakisha ahlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene zekhwalithi ngenxa yezimo ezahlukahlukene zemikhiqizo kwimishini, ukusebenza, izinto zokusetshenziswa, ubuchwepheshe bekhwalithi nokusetshenziswa. Leli phepha lizokhuluma ngenkinga esivele ikhona, okungukuthi, amandla wesikhwama sokuvula nobushelelezi bawo.
Isibonelo, ifilimu ye-polyethylene ejwayelekile engaphezulu kathathu yakhiwa ungqimba lwe-corona, ungqimba olusebenzayo oluphakathi nongqimba lwezimpawu ezishisayo ezansi. Imvamisa, izithasiselo zokuvula nezibushelelezi ziyangezwa kusendlalelo esishisayo sokubekwa uphawu. Isengezo esibushelelezi sidluliswa phakathi kwezendlalelo ezi-3, futhi ukuvuleka kokungezwa akuyona.
Njengento evala ukushisa, izithasiselo zokuvula nezibushelelezi ziyadingeka lapho kukhiqizwa inhlanganisela yokupakisha eguquguqukayo. Zihlukile ngokuyisisekelo, kepha abakhiqizi abaningi bokupakisha abaqondi ukuthi ziyefana.
Isengezo esivulekile sokuvula siyatholakala ngokuthengisa i-silicon dioxide, nokuyinto engaphili engakhuphula ukumelana nefilimu ku-viscosity. Amanye amakhasimende ahlala ethola ukuthi izingqimba ezimbili zesikhwama zibonakala zifiphele phakathi kwazo, njengezingilazi ezimbili ezigqagqene. Uzobona ukuthi bushelelezi ukuvula nokusula, okuvame ukuntuleka ekuvuleni izithasiselo. Futhi nabanye abenzi bamafilimu abayisebenzisi.
Isengezo esijwayelekile esibushelelezi yi-Erucic acid amide, okuyi-powder emhlophe evame ukunamathela ku-roller lamination kanye ne-roller roller kunqubo yokuncibilikisa isisekelo se-solvent-base. Uma kufakwa okweqile kwe-ejenti ebushelelezi ngesikhathi senqubo yokuncibilikisa ngaphandle kwe-solvent, abanye bazosakazeka kungqimba lwe-corona njengoba kuphulukisa izinga lokushisa, okuholela ekwehleni kwamandla okuxebuka. Ifilimu yoqobo ye-lamination esobala ehlutshiwe emhlophe, ingasulwa ngezicubu. Kukhona indlela yokuhlaziya nokuhlola ukuthi amandla anciphisiwe anciphisiwe athintwa yini izithasiselo ezeqile, ukubeka ifilimu eline-low laminate kuhhavini ku-80 ℃ okwemizuzu emihlanu, bese uvivinya amandla. Uma inyuka kakhulu, kuphetha ngokusobala ukuthi ukuncipha kwamandla wokuxubha kungenxa ye-ejenti ebushelelezi kakhulu.
Uma kuqhathaniswa nokubuyiselwa emuva kwe-solvent-base lamination, indlela ye-solution-free lamination kulula kakhulu ukufeza ukudluliswa okungeziwe nokusabalalisa. Indlela ejwayelekile yokwehlulela i-solvent free laminating rewind ukubheka ukuthi zihlangene futhi zicocekile ngokwanele ukuvumela ukugeleza okungcono okubushelelezi kokunamathisela okungenayo i-solvent. Ingcindezi ephakeme iroli yefilimu ilingana nayo, okufakwayo okushelelayo kakhulu kungenzeka kuthuthele koqweqwe laminethiwe, noma ungqimba wokuphrinta. Ngakho-ke, sihlala sididekile ngalolu daba. Esingakwenza ukunciphisa ukushisa okuphulukisayo, ukwehlisa isisindo sokumboza, ukukhulula ifilimu, bese ufaka izithasiselo ezibushelelezi kaninginingi. Kepha ngaphandle kokulawulwa okuhle okungenhla, ukunamathela kunzima ukulapha futhi kugcina amanzi. Izithasiselo eziningi kakhulu ngeke zithinte kuphela amandla wokuxebuka wesikhwama seplastiki, kodwa futhi zingathinta nokusebenza kwazo okushisayo.
IKANDA NEW MATERIALS ikhiphe uhide lwezihlanganisi ukuxazulula lezi zinkinga. Isinamathelisi se-WD8117A / B esiphindwe kabili-isincomo esihle. Sekuqinisekiswe amaklayenti isikhathi eside.
I-coefficient yangempela yokushayisana
I-coefficient ekhiqiziwe yokushayisana
I-WD8117A / B ingasetshenziselwa ukuxazulula inkinga yamandla amabi wokuxebuka nokusebenza okushisayo okushisayo ngenxa yezithasiselo ezeqile ezibushelelezi zomhlaba ngaphandle kokudinga ukuthi umenzi wefilimu wokuqala azinciphise.
Ngokwengeziwe, i-WD8117A / B inezinye izakhiwo ezimbili:
1. Amandla wokuxebuka we-OPP / AL / PE angaphezulu kuka-3.5 N, asondele noma aphakeme kunalawo ezinye zokunamathisela kwe-solvent-base laminating.
Ukuphulukiswa okusheshayo. Ngaphansi kwezimo eziphakanyisiwe, ifilimu e-laminating inganciphisa isikhathi eselaphayo samahora angama-8, okukhulisa kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza.
Ukufingqa, ukuzimisela kokugcina kokungqubuzana kwe-coefficient yefilimu ehlanganisiwe kufanele kususelwe kuma-coefficients we-static friction phakathi kwefilimu nensimbi yensimbi. Imibono eyiphutha yokuthi kunzima ukuvula isikhwama ngoba azikho izithasiselo ezisheshayo ezanele okufanele zibonwe futhi zilungiswe. Singafinyelela kuphela ukuzinza nemikhiqizo yokupakisha eguquguqukayo ephakeme ngokufingqa ngakunye nokubuyekeza.